Global Voices teny Malagasy » MENA: Mianatra Momba ny Fiarovana Ara-Dizitaly, Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Jona 2018 8:39 GMT 1	 · Mpanoratra Thalia Rahme Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Fanabeazana, Fitaovana, gazety, Mediam-bahoaka, Rising Voices
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2014)
Hatramin'ny niandohan'ny Lohataona Arabo, fitondrana maro no nahatsikaritra fa raha te-hanafoana fikomiana izy ireo dia mila mifehy, manivana na mikirakira ny Aterineto mba hampihenana ny fiantraikany. Noho izany, ireo mpikatroka sy mpanao gazety ao amin'ny faritra MENA – na dia afaka maneho ny feony mafimafy kokoa noho ny taloha aza – dia ankehitriny ihany koa , mihoatra ny hatramin'izay, lasa ianjadian'ny famoretana ataon'ny fanjakana amin'ny fifaneraserana sy hetsika an-tambajotra. Misy filàna fiarovana mihamitombo eny anivon'ireo mpikatroka mba hiarovana ny maha-izy azy, ny rakitra momba azy, ary ny tambajotra, no sady mbola manohy ny tolona hisianà tontolo Arabo demokratika sy tsy misy kolikoly kokoa.
Sehatra vaovao hafa no efa natomboka tato ho ato mba hanomezana loharanom-pitaovana amin'ny alalan'ny atrikasa amin'ny teny Arabo an-tambajotra ary amin'ny teny Arabo: Ny Akademia An-tambajotran'ny Cyber Arabo .
Ny pejy fandraisan'ny Akademia An-tambajotran'ny Cyber Arabo.
”Tetikasa tokana ity satria afaka mandray anjara amin'ny fampianarana anaty aterineto ireo mpikatroka sy mpampiasa aterineto izay ahafahan'ireo manampahaizana manome fampahalalana tsara kalitao momba ny olana amin'ny fiarovana ara-dizitaly,” hoy i Mariwan Hama nandritra ny tafatafa nifanatrehan-tava iray. I Hama no mpitantana ilay tetikasa ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Tatitra momba ny Ady sy ny Fandriampahalemana  (IWPR), ireo mpanohana ny Akademia An-tambajotra. ” Tsy mila miala any an-tranony na any amin'ny fireneny izy ireo, amin'ny teny arabo avokoa ny zavatra rehetra ampianarina ary natao ho an'ny rehetra, ary maimaimpoana.”
Ilay tranonkala Akademia An-tambajotra vao natomboka vao haingana dia ampahany amin'ilay tetikasa goavambe Cyber Arabs , izay manana ny tombony amin'ny maha-amin'ny teny Arabo azy manontolo. Manantena ny hanome torohevitra momba ny fiarovana ara-dizitaly, fisoloana vava ary fikatrohana an-tambajotra izy ireo, ahitana ny:
- Fiofanana mifanatri-tava: mba ianaran'ireo mpikatroka mikasika ny loza mitatao amin'ny fiarovana ara-dizitaly sy tetika mba hamerana ny loza atrehany amin'ny asany;
- Fampianarana an-tambajotra: mba hanampiana ireo mpikatroka amin'ny famakiana ny fototry ny angondrakitra, aterineto, tambajotra ary fiarovana amin'ny finday;
- Fanofanana ireo mpanofana: ho an'ireo mpikatroka mihevitra ny hampianatra ny sasany ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy azy;
Loharano an-tambajotra: afaka jeren'ny olona maro kokoa
”Tetikasa mampientanentana izy ity ary andrandrainay ny hanao izay tsara indrindra vitanay izahay mba hiatrehana ireo fanambin'ny resaka fiarovana dizitaly atrehan'ireo mpikatroka sy ny mpampiasa aterineto ao amin'ny faritra,” hoy i Hama. ”Ary mampiaiky volana no valinteny. Vao haingana no nanambara ilay atrikasanay an-tambajotra voalohany izahay ary tao anatin'ny andro vitsivitsy dia efa olona mihoatra ny 100 no nanoratra anarana ho amin'ireo fampianarana.”
Manohana ireo olona eny ambavahadin'ny fifandonana sy krizy manerana izao tontolo izao ny IWPR, mifantoka kokoa amin'ny fiarahana miasa miaraka amin'ny fiarahamonina sivily sy ny fanjakana mba hahazoana antoka fa hisy vokany ny fampahalalam-baovao atolony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/09/120634/
 Akademia An-tambajotran'ny Cyber Arabo: http://e-academy.cyber-arabs.com/
 Ivontoerana ho an'ny Tatitra momba ny Ady sy ny Fandriampahalemana: http://iwpr.net/